Budata PhotoRescue maka Windows
Free Budata maka Windows (3.39 MB)
PhotoRescue maka Windows bụ mmemme iji weghachi onyonyo ehichapụrụ na-achọghị ihe ọmụma kọmputa dị elu. Ị nwere ike naghachi gị na mberede ehichapụ ma ọ bụ furu efu foto na a software. Ekele maka mmemme a, nke nwere njirimara nke iweghachi data ehichapụ na ngwaọrụ USB ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị na mpụga, enwere ike weghachite foto gị nke furu efu ngwa ngwa na enweghị nsogbu ọ bụla.
Nke a na omume nwere ike naghachi ọtụtụ graphic formats dị ka JPEG, TIF, TIFF, GIF, BMP, PNG, WMF na ndị ọzọ. Nke a software nwere ike na-agba ọsọ na Windows NT, XP, Vista na 7 sistemụ arụmọrụ; Ọ dakọtara na ọtụtụ sistemụ faịlụ dị ka FAT 12, FAT 16, FAT 32 na NTFS. Ọ dị irè karịa ọtụtụ mmemme mgbake onyonyo. SmartMedia nwere ike ịrụ ọrụ na CompactFlash, Kaadị ebe nchekwa, MultiMedia, Kaadị SD, Kaadị SDHC-Kaadị, Kaadị foto xD, USB ma ọ bụ Micro draịva na ọbụna diski ike FAT. Ọ nwere nchekwa yana enweghị koodu ederede na kaadị.
Nha faịlụ: 3.39 MB
Mmepụta: German Sales Agency
CompactGUI bụ ngwa mkpakọ faịlụ nke ga -aba uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere Windows 10 sistemụ...
PDF Compressor V3 bụ ngwa nwere ike belata nha faịlụ PDF. Ngwaọrụ a nwere ike inyere gị aka ma ọ...
EaseUS Win11Builder bụ mmemme efu na -enyere gị aka ịkwadebe USB 11 bootable USB ma ọ bụrụ na...
AnyTrans bụ mmemme Windows nke m chere na ndị na -achọ mmemme iTunes ọzọ ga -enyocha ya. Nnukwu...
Ngwa FolderSizes bụ ngwa njikwa ohere diski ebe ị nwere ike nyochaa faịlụ na -ewere ohere na diski...
Ihe nhicha nchekwa efu bụ akụrụngwa efu ebe ndị ọrụ nwere ike nyochaa sistemu ha, chọta folda nwere...